Sidee ku billowday dagaalka Muqdisho? | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Habeenkii Khamiista, 18-kii Feb dagaal culus ayaa xili saqdii dhexe mar uun si kedis ah uga billowday nawaaxiga Daljirka Dahsoon, ee magaaladda Muqdisho oo Jimcihii la filayay inuu banaanbax ka dhaco.
Dad badana ayaa wali is waydiinaya waxa sababay dagaalka iyo sida wax u dhaceen. Macluumaad hoose oo KON ay heshay ayaa sheegaya in rasaasta ay billaabatay kadib markii labo Gaari oo Cabdi-Bille ah, oo ay la socdeen askar ay u goosteen dhanka Ciidanka Sheekh Shariif.
Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh waxay xiligaas uu dagaalka dhacayay ku sugnaayeen hotel Maida oo ku dhaw goobta loo qorsheeyay dibadbaxa ee taaladda Daljirka Dahsoon.
Ciidan badan iyo taliyeyaashooda ayaa kasoo baxay DANAB, iyagoo ku biiray garabka Sheekh Shariif, waxayna u muuqataa inay arinta salka la gashay qabiil taasoo laga digayo inay horseedo dagaal sokeeye oo ka dhaca Muqdisho.
Dagaalkii Muqdisho wuxuu yimid kadib markii dowladda is-hortaag ku sameysay dibadbaxa Musharixiinta, oo mudo maalmo ah iclaaminayay inay hogaaminayaan isku soo baxa ballaaran oo lagu diidan yahay inuu Farmaajo xafiiska sii joogo, isagoo waqtigiisa dhamaaday Feb 8.
Ilaa hadda lama ma cada hasaaraha dagaalka, balse Macluumaadka ay Keydmedia Online ka haleyso laamaha caafimaadka ayaa sheegaya in ku dhawaad 60 qof ay ku dhinteen xabadeyntii shalay.
Sidoo kale, Safaradda Mareykanka ayaa sheegtay in dad gaaraya 20 qof ay ku dhimatay, sidoo kale hoobiyeyaal ay ku dhaceen Garoonka diyaaradaha, iyagoo la joojiyay duulimaadka.
Dhacdooyinkii Shalay & Habeen hore